Maamulka gobolka Nugaal oo sheegay inay gacan bir ah ku qabanayaan cid walboo khalkhal galisa xasiloonida. – Radio Daljir
Janaayo 14, 2013 1:55 b 0
Garoowe, Jan, 14- Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) ayaa digniin u diray dad uu sheegay in ay gobolka ka dhex abuurayaa xaalado amni xumo, wax weyna u dhimaysa xasiloonida dad iyo deegaan.
Mudane Qarjab oo waraysi siiyay radio daljir ayaa sheegay in maamulku uusan wadahadal la gelidoonin cid kasta oo hareer maarta shuruucda u degsan dawladda Puntland, wuxuuna intaas ku daray in ay jiraan dad mudaharaadyo ka abaabulaya meelo ka mid ah gobolka Nugaal, sida degmada Burtinle.
Gudoomiyuhu waxaa uu sheegay in ay sharciga la tiigsandoonaan ciddii isku dayda in tallaabooyin wax u dhibaya amniga gobolka Nugaal, isagoo sheegay in ay dawladdu soo dhaweyneyso cid kasta oo mucaaradnimadoodu ay sharciga waa faqsantahay.
Hadalka gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa kusoo beegmay xilli degmada Burtinle oo ka tirsan degmooyinka Nugaal shalay laga dareemayey abaabul ku aaddan in degmada uu ka dhaco mudaaharaad looga soo horjeedo muddada halka sano ah ee xukuumadda m/weyne Faroole.
Booliska gobolka Mudug oo maanta mar kale ka hortagay dibad bax.